Home/စာတိုက်/Uncategorized/အာရပ်ကျန်းမာခြင်း - ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Tekna ရှိပါတယ် ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်များ Display ကိုအပေါ်! ဒါဟာ၏နေ့သုံးရက်တွင်အလွန်အလုပ်များဖြစ်ပါသည် အာရပ်ကျန်းမာရေးပြပွဲ နှင့်ကွန်ဂရက် 2018! ကျွန်ုပ်တို့၏3လေထု Monoplace Hyperbaric ကုန်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏3နှင့်6လေထု Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်များအပေါ်လက်ခံရရှိထားသောအပြုသဘောတုန့်ပြန်မှာမိန်းမောတွေဝေကြသည်။ 2018 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-အိမ်သူအိမ်သား ASME-PVHO ဖိအားသင်္ဘောဆိုင်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဌာနများအတွက်အလွန်အလုပ်များတစ်နှစ်ဖြစ်သွားသည်။ တို့ကလာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အတွက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း နည်းပညာ။ Tekna တစ်ဦးရှိပါတယ် hybrid ကို 4000 တဲအတွင်းခင်းကျင်းပြသ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဤတွင် Z1.C02!